ရုံးနေရာများ ရောင်းရန်နှင့်ငှားရန် အပေါ် Realtyww Info
ရုံးနေရာများ in London
ရုံးနေရာများ in Hampshire
ရုံးနေရာများ in Blackpool
ရုံးနေရာများ in Lancashire
ရုံးနေရာများ in Beeston
ရုံးနေရာများ in Aylesbury
1 - 10 ၏ 6790 စာရင်းများ
မြင်ကွင်း ရုံးနေရာများ ထုတ်ဝေခဲ့သည် 1 day ago
Oru space is based on Lordship Lane and offers great flexibility for start-ups and established businesses alike, offering Hot desks for individuals, fixed desks for small teams and private offices for teams all offering access toaprivate and secure spaces, filled with abundance natural light and m...
South London in London, Se22 8hn
Office To Let In Test Valley, Hampshire
Newly-refurbished modern, open-plan office space to let in Home Farm Business Centre.Perfect for anyone looking to runabusiness fromavery attractive rural business centre.Located around the central courtyard, this office offersasunny aspect over the communal garden, with c.910 sqft of space, i...
Test Valley in Hampshire, So51 0jt
ထုတ်ဝေသည် The Online Letting Agents Ltd
Property DescriptionThe Warehouse isalandmark office building, which was comprehensively refurbished in 2015 by developer Helical Plc and architects ahmm. It comprises 122,000 sq ft of high-quality office space which retains the building’s period features whilst creating modern workspace. It is le...
North London in London, Ec1v 9nr
ထုတ်ဝေသည် Cushman Wakefield
998,223 Pound £
Availability:Room: 41Size: 154 sqftMonthly rent: £365 + VATPinnacle House isanewly refurbished business centre designed to suit the modern business requiring well-appointed and furnished office space withahigh end specification…• Easy in – easy out terms• Superfast fibre broadband• Wi-Fi network...
ထုတ်ဝေသည် Vacant Units
4,380 Pound £
Description:Six brand new Commercial office units located to the rear of five recently constructed houses which will be finished toahigh standard including under floor heating, triple glazed windows, and skylights. The interiors can be configured to tenants’ specific requirements.The circa area is...
North London in London, N10 1he
ထုတ်ဝေသည် Martyn Gerrard - Commercial Department
19,450 Pound £
High specification modern offices.Architecturally designed, Calder Court has been built to offer the most superior office accommodation available.The offices benefit from car parking, open plan space, lift facility, air conditioning and computer wire ways. The whole unit benefits by way ofakitchen...
Blackpool in Lancashire, Fy4 2rh
ထုတ်ဝေသည် Duxburys Commercial
Office To Let In Beeston, Nottingham
Modern style first floor office space located onaprominent high street in Beeston912sq.ftRecently fitted UPVC double glazing throughoutGCHUpgraded security door and entry phone systemMains supply of water, gas and electricity is connected to the property
Beeston in Nottingham, Ng9 2lh
ထုတ်ဝေသည် Bk Property Management Ltd
Office For Sale In Blackpool, Lancashire
Duxburys Commercial are delighted to offer this new business unit to lease or buy.The unit is part ofanew development of9hybrid units suitable foravariety of uses including, storage, office, trade, workshop and artisan industries.- WC/Kitchenette- Three phase electricity, water and telephoneco...
Blackpool in Lancashire, Fy4 5pn
Aston clinton A41 Development Site. 55,000 sq ft (5110 sq m) Office Building.The property will be Grade A Specification with good on-site car parking.Our Clients, Inland Homes have obtained planning permission for approximately 400 residential units, provision ofacare home, hotel/pub/restaurant, a...
Aylesbury in Buckinghamshire, Hp22 5ab
ထုတ်ဝေသည် Chandler Garvey Ltd
1,320,000 Pound £
ရုံးတစ်ရုံးသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအလုပ်များလုပ်သောအခန်းသို့မဟုတ်အခြားisရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်း၌၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သောတာဝန်များပါ ၀ င်သည့်ရာထူးကိုရည်ညွှန်းနိုင်သည် (အရာရှိ၊ ရုံးပိုင်ရှင်၊ အရာရှိကိုကြည့်ပါ); အဆုံးစွန်သောအချက်သည်အစောပိုင်းကအသုံးပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးရုံး၏မူလတည်နေရာကိုရည်ညွှန်းသောရုံးခန်းဖြစ်သည်။ နာမဝိသေသနအဖြစ်အသုံးပြုသောအခါ“ ရုံး” ဟူသောဝေါဟာရသည်စီးပွားရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပဒေရေးရာအရေးအသားအနေဖြင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင်သူ၌ရုံးခန်းတည်ရှိသည်ဆိုသည့်နေရာတွင်ရုံးများရှိသည်။ ရုံးတစ်ခုဗိသုကာနှင့်ဒီဇိုင်းဖြစ်ရပ်ဆန်းဖြစ်၏ ၎င်းသည်သေးငယ်သည့်စီးပွားရေးသေးငယ်မှု၏ထောင့်ရှိခုံတန်းလျားကဲ့သို့သောရုံးခန်းသေးသေးတစ်ခု (ရုံး / အိမ်ရာရုံးငယ်ကိုကြည့်ပါ) အဆောက်အ ဦး များ၏အထပ်တစ်ခုလုံးမှတစ်ဆင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးကို ရည်စူး၍ တည်ဆောက်ထားသောကြီးမားသည့်အဆောက်အ ဦး များအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။ မျက်မှောက်ခေတ်အသုံးအနှုန်းများအရရုံးတစ်ရုံးသည်များသောအားဖြင့်အဖြူကော်လာလုပ်သားများအလုပ်လုပ်သည့်နေရာကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဂျိမ်းစ်စတီဖင်ဆင်၏အဆိုအရ "ရုံးသည်၎င်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုး၏ ဦး ဆောင်မှုနှင့်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုမြှုပ်နှံသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ "